Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » 13 Mashruuc oo loogu talagalay 13 Degmo si loo badbaadiyo Dalxiiska Himalayan
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Beerta Tulip ee Uttarakhand
Gobolka buuraleyda ah ee Uttarakhand, oo ah gobol ku yaal woqooyiga Hindiya oo ay ka tallaabaan buuraha Himalayas, ayaa qorsheynaya in ay horumariyaan 13 mashruuc oo dalxiis oo laga hirgalinayo 13-ka degmo.
Ujeeddada mashaariicdu waa in laga wareejiyo dalxiiska dhibaatooyinka liita ee ay sabab u tahay COVID-19 loona wareejiyo soo-booqdayaal ballaaran oo ka wanaagsan.
Dhaqaalaha ku baxaya mashaariicdan ayaa laga doonayaa dowladda iyo sidoo kale hey’adaha horumarinta gaarka loo leeyahay.
Sida adduunka oo dhan ka dhacda, dalxiisku hadda wuxuu raadinayaa in laga fogaado ciriiriga oo la helo fursado dalxiis oo caafimaad qaba.
13ka degmo ee Uttarakhand ayaa kala ah Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri, Udham Singh Ngar, iyo Uttarkashi. Beer tulip oo ku taal degmada Chamoli iyo Astro Park ayaa ka mid ah mashaariicda la bartilmaameedsaday.
Muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha Hindiya, sida ka dhacda meelo kale, diiraddu waxay ahayd in dalxiiska laga eego dhinaca caafimaadka oo laga fogaado dhibaatooyinka hore ee COVID-19 iyo dhammaan ciqaabtiisa iyo saamayntiisa. Uttarakhand waa mid kamid ah gobaladii ugu dambeeyay ee dalxiiska ka fiiriya xagal dhan ahaaneed si saameynta dalxiiska ay ahaato mid wanaagsan.
Ujeeddadu waa in lagu faafiyo mashaariicda aagag kala duwan si loo yareeyo awooda dalxiiska. Wax qabad waa inay gacan ka geysataa sidii looga saari lahaa tirada dalxiisayaasha meelaha ay aadayaan, sida ay sheegeen saraakiisha sarsare ee dalxiiska.
Juergen T Steinmetz wuxuu leeyahay,
Ogosto 8, 2021 markay tahay 20:07
Ma oggolaanno dhammaan faallooyinka. Faalladaadu waxay kor u qaadday khamaarka internetka mana la xiriirin sheeko.